Muhammad Bin Salmaan "Falasxiinonni yaada Donaald Traamp haa fudhatan yookaan haa callisan" jedhe. - NuuralHudaa
Muhammad Bin Salmaan “Falasxiinonni yaada Donaald Traamp haa fudhatan yookaan haa callisan” jedhe.
Last updated May 3, 2018 29
Dhaaltuun Goonfoo Sa’udii Muhammad Bin Salmaan ji’a dabre keessa Garee Yahuudoota Ameerikaa waliin marii dhoksaan geggeesse irratti “Hooggantoonni Falasxiin yaada araaraa Ameerikaan nageenya naannichatti buusuuf akka furmaataatti dhiheessitu dirqama fudhatuu qabu, yookaan ammoo caallisuu qabu” jechuun akka dubbate Midiyaaleen Isra’eel gabaasan.
Akka gabaasichaatti Muhammad Bin Salman, Walgahii dhoksaan baatii darbe keessaa hooggantoota gareelee Yahuudota Ameerikaa keessatti argaman waliin magaalaa Niwuyoork keessatti geggeese irratti, Prezdantii Falasxiin Mahmuud Abbaas qeeqaa ture.
Muhammad Biin Salmaan “Yeroon kan Falasxiinonni yaada furmaata ni taha jedhame itti fudhatanii fi walii galtee irra gahuufis itti marii godhaniidha; yoo didan immoo afaan isaanii haa qabatan” jedhe.
Dhuma waggaa darbee keessa Prezdantiin Ameerikaa magaalaan ALQUDS magaalaa guddoo Isra’eliiti jechuun labsuun isaa ni yaadatama. Muhammad Bin Salmaan immoo prezdaantiin Falasxiin Mahmuud Abbaas akka murtii kana qeebalu dhiibbaa irratti godhaa kan ture yoo tahu, Prezdant Mahmuud Abbaas Labsii Traamp kuffisuun, amma booda Ameerikaan Nuuf Isra’eel jiddutti jarsummaaf hin hirmaattu jechuun dide.
Baha Jiddu-GalaaDonald TrumpFalasxiinIsraa'elMuhammad Bin SalmaanSa'uud Arabiyaa
July 6, 2022 sa;aa 6:35 am Update tahe